SuSE inotivigira CaaS yayo yepuratifomu sechikamu chezvivakwa zvayo | Linux Vakapindwa muropa
Iyo inozivikanwa kambani yeGerman SUSE inotiunzira iyo CaaS chikuva sechikamu chezvivakwa zvine simba. Iwe unoziva kuti SUSE iri muhondo inotyisa neRed Hat yebhizinesi reanoshanda masisitimu mubhizinesi chikamu. Hondo iyoyo inovatungamira kuti vagare vari mukuvandudza uye vachiita mubatanidzwa nevechitatu mapato kuti vakwanise kupa zvigadzirwa zvakanakisa kune vatengi vavo kumaseva, mainframes, uye supercomputers, inova chikamu chikuru cheSUSE Enterprise Linux neRHEL.
Zvakanaka, kubva kuChina zvakaziviswa kuti iyo CaaS Platform, ndiko kuti, chikuva chemidziyo sevhisi, ichigadzira fananidzo neyegore masevhisi IaaS, PaaS, uye SaaS. Mune ino kesi, mazwi ekufananidza anoenderana neContainer seSevhisi Uye chaizvo iko kusimudzira uye kuitisa chikuva chemidziyo-yakavakirwa kunyorera uye masevhisi. Mhinduro yacho ingori chimwe chete chidimbu chemhando dzakasiyana siyana dzekuvandudza uko SUSE inopa, ichibvumira vatengi vayo zviitiko zvakanakisa.
Makambani anotsvaga kuwedzera agility yebhizinesi uye anoda mhinduro dzakanakisa, ndosaka muchikamu ichi iwe uchifanira kukwikwidza kana kurasikirwa nevatengi vakakosha. Mune ino kesi, CaaS inotarisa pane virtualization matekinoroji saka mukuda nhasi uye kunyangwe zvakadaro nenzvimbo yekubikira yeCloud Computing. Kunyanya, iko kuona pamwe nemidziyo ine mukurumbira yatakataura nezvayo pano kakawanda kana tichitaura nezvezvakanaka mapurojekiti seDocker, CoreOS, nezvimwe.
Sezvatakadzidza, SUSE's CaaS Platform yakavakirwa pambiru nhatu dzakakosha. Imwe yadzo ndeye orchestration kuburikidza neyakavhurwa sosi Kubernetes chirongwa, kune rimwe divi iyo inoshanda system SUSE MicroOS yakagadzirirwa zvakananga microservices, uye zvechokwadi midziyo. Nenzira, kune avo vasingazive MicroOS, unogona kuwana rumwe ruzivo mu SUSE yepamutemo webhusaiti. SUSE yanga yatove kushanda pachirongwa ichi kwemwedzi, inoshanda sisitimu yakavakirwa paSUSE Enterprise Linux, ichiona zviratidzo zvekutanga kwekuvapo kwayo kutanga kwegore rino ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » SuSE inotiunzira iyo itsva CaaS chikuva sechikamu chezvivakwa zvayo
Debian Edu zvakare anovandudza kuStretch
Ubuntu 17.10 ichaunza PIE rutsigiro uye huviri boot kuvandudza kuGRUB